यि ६ वटा खानेकुरा जसलाई पुनः तताएर खाँदा क्या’न्सरको ख’तरा ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
यि ६ वटा खानेकुरा जसलाई पुनः तताएर खाँदा क्या’न्सरको ख’तरा !
सबैको घरमा हुने सामान्य प्रक्रिया हो एक समय पकाएको खाना फेरि तताएर खानु । यो सामान्य लागेपनि कतिपय खानेकुरा फेरि तताएर खानु निकै हानिकारक हुन्छ । कतिपय यस्ता खानेकुरा पनि छन्, जुन पुनःतताएर खाँदा क्यान्सर जस्तो भयानक रोगको समेत खतरा हुन्छ । आज हामी त्यस्ता खाने कुराको बारेमा जानकारी दिन्छौँ ।
कुखुराको मासु: कखुराको मासुलाई दोहोराएर तताएर खानु हानिकारक हुन्छ किनकनी यसमा पाइने प्रोटिन कम्पोजिशन पुनःतताउँदा बदलिन्छ, जसको कारण पाचन सम्बन्धी समस्या हुन्छ ।
आलु : तरकारीको राज मानिने आलुलाई स्वास्थ्यबर्धक मानिन्छ । आलुको परिकारलाई लामो समयसम्म राख्दा यसमा भएको पोषक तत्व नास भएर जान्छ साथै आलुको परिकारलाई पुन तताएर खाँदा पनि पाचन सम्बन्धि समस्या देखिन्छ ।
चुकन्दर: चुकन्दरलाई पनि दोराएर तताउनु हुँदैन । यसको परिकारलाई पुनः तताउँदा यसमा पाइने नाइट्रट नाश भएर जान्छ ।
च्याउ: च्याउ सकेसम्म सधैँ ताजा नै खानुपर्दछ । च्याउलाई प्रोटिनको भण्डार नै मानिन्छ । पकाएको च्याउलाई फेरि तताएर खाँदा यसमो पाइने प्रोटिनको कम्पोजिसन फेरिन्छ जुन स्वास्थ्यको लागि निकै हानिकारक हो । त्यस्तै एक पटक पकाईसकेको खाने कुरा पुनः तताउन नहुने सूचीमा अण्डा र पालुङ्गोको साग पनि पर्दछ ।
यि माथि उल्लेखित खानेकुरा पुनः तताउँदा यसमा पाईन प्रोटिन नष्ट भई उत्पन्न तत्वले क्यान्सर निम्त्याउन सक्छ ।
यो पनि पढ्नुस: उसिनेको अण्डा खाएपछि भुलेर पनि नखानुहोस् यी ४ चिज, निम्त्याउँछ यस्तो खतरा !
अण्डामा पाइने प्रोटिनहरूले तपाईंको शरीरलाई उर्जा दिन्छ, हड्डीहरूलाई सुदृढ पार्छ र आँखाको लागि पनि स्वस्थ हुन्छ। भरपूर पौष्टिक तत्व समावेश गरेकै कारण अण्डालाई पौष्टिक आहारको श्रेणीमा राखिएको छ। अण्डा खाँदा विभिन्न फाइदा त मिल्छ नै तर यदि तपाईं दैनिक रूपमा उसिनेको अण्डा खानुहुन्छ भने केहि कुराको ख्याल राख्न अत्यन्त जरूरी हुन्छ। आज हामी तपाईंलाई यस्तै चीजको बारेमा बताउँछौँ जुन उसिनेको अण्डा खाएपछि भुलेर पनि खानु हुँदैन।
माछा : उसिनेको अण्डा खाएपछि कहिल्यै मासु वा माछा खानु हुँदैन, किनभने यदि तपाईं उसिनेको अण्डा खानुभयो भने तपाईंलाई छालासँग सम्बन्धित एलर्जीको हुनसक्छ। एजेन्सीको सहयोगमा